Miyuu guddiga fulinta ee xiriirka UEFA ku ciqaabi karaa Real Madrid bilawga mashruuca Super League? – Gool FM
Ahmed Nur April 22, 2021
(Yurub) 22 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa dusha loo saaray aragtida aas-aaska tartanka European Super League, iyadoo ay wali baaqi kula tahay tartankan kooxda Barcelona maadaama 10-kii kooxood ee kala ay isaga baxeen mashruucan.
Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta UEFA ee Aleksander Ceferin ayaa ku hanjabay inay ciqaabi karaan Los Blancos, sidoo kalena ay jirto suuro-gelnimo ah in Champions League laga saari karo.
Dacwadan ka timid Madaxweyne Ceferin ayaa la hor geyn doonaa guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub kuwaasoo maalinta Jimcaha kulmaya si ay uga doodaan garoommada ugu dambeyn lagu marti gelinayo tartanka qarammada qaaradda Yurub, waxaana ajandaha lagu soo dari doonaa dhacdadii toddobaadkan.
Si kastaba ha ahaatee, guddiga fulinta ee UEFA ayaanan lahayn awood uu ku ciqaabi karo Real Madrid, haddii ay noqoto in dacwadaas la qaadana, waxaa ku shaqo leh guddiga anshaxa, hase ahaatee, waxaa lagu soo warramayaa inaysan guddiyada kala geddisan ee UEFA ay ku ciqaabi karaan Los Blancos aas-aaska ESL.
Haddii ay dhacdo in Real Madrid dacwad ku aaddan arinta tartankan lagu soo oogo, waxaa kaliya dacwadaas qaadi kara maxkamadda garsoorka isboortiga ee Court of Arbitration for Sport (CAS).
Khubarro dhanka sharciga ah ayaa MARCA u sheegay inaysan Madrid la kulmi karin ciqaab la xiriirta European Super League maadaama aysan u gafin shuruucda anshaxa ee UEFA, maxaa yeelay ma jiro sharci diidaya in tartanka barbar socda tartammada Yurub la bilaabo.
Ugu dambeyn, iyadoo Talaadadii aynu soo dhaafnay la dajiyay qorshaha cusub ee tartanka Champions League, misena laguma soo darin qodob sharci ah oo kooxaha Yurub u diidaya inay aas-aasaan tartan kale.